Waxaa jira noocyo kala duwan oo nidaam hawlgal laakiin Microsoft OS qarinaysa in ka badan 70% ka mid ah suuqa OS. Windows XP ayaa la bilaabay oo qayb ka ah NT qoyska nidaamyada computer. XP la bilaabay 24 Aug 2001, iyada oo kala duwan oo ka mid ah sifooyinka iyo shaqeynayaan cusub sida IPv4 taageero, xasilooni dheeraad ah, gui wanaajiyey, muuqaalada imaging hagaagay sida Windows Picture oo Falanqeynta Fax, image wanaajiyey iyo caching thumbnail in Explorer. Waxaa si habsami leh kara mashiinka la 128 MB RAM dhinaca kale Windows 7 wuxuu u baahan yahay ugu yaraan RAM 700MB shaqayso siman.
Windows XP la sii daayay laba koob oo waaweyn, Home Edition iyo Professional Edition. Passwords asal ahaan u dhaqmaan sida fure oo albaabka u furaya xogta xasaasi ah iyo warbixin user. Dad badan ayaa lagu wadaa sirta ah ee ay computer.
SAM, tababaraha Security Accounts, waxa ku jira oo dhan sirta ah ee xisaab qaab Windows XP. Files lagama decrypted karaa sida ay qabto mid ka mid ah habka sirta laakiin ay offline laga heli karaa si loo joojiyo oo passwords.The shabaqa user amarka waxaa loo isticmaalaa in lagu daro, ka saar, iyo isbedel ay sheegeen user on computer ah, oo dhan ka amar Xusuusi iyo waxaan isticmaali doonaa amarka in la beddelo nidaamka akoonka password.
Laakiin Maxaa dhacaya haddii aan kaliya illoobin sirta ah? Sidaas, hoos ku qoran yihiin 8 siyaabo bilaabo fudud ama dhexdhexaad ah heerka lagu furfuro ama dib maamulaha password Windows XP ka.
Habka 1: Isticmaalka cracker password for Windows XP
Runtii waa wax aad looga xumaado, haddii aad ilowday sirta Windows XP oo aan ka gali kartaa. Laakiin waxaa jira Windows XP software cracker password badan oo la heli karo si ay u xaliyaan dhibaatadan. Halkan waxaan ku soo bandhigi doonaa LiveBoot Wondershare in crack sirta Windows XP.
1. Download iyo rakibi Wondershare LiveBoot on computer kale.
2. Ka dib markii socda Liveboot on your computer, interface barnaamijka lagu soo bandhigi doonaa sidii dabagal. Geli CD ka diyaariyey ama USB drive galay kombiyuutarka, iyo raacaan edbinta si ay u gubaan USB ah Downlaods ama CD. Gubashadii wuxuu bilaabi doonaa in 1 click markaas. Haddii aad aadan lahayn gubi on your computer, waxa kale oo aad dooran kartaa in aad ku gubi doonaan drive USB ah, taas oo si toos ah gubay karo barnaamijkan.
3. Markaas xirmaan disk ee khaanada Downlaods ama USB in kombiyuutarka, oo password maamulaha aad u halmaanteen. Orod F12 computer iyo jaraa'id ku bilowday suuqa kala inuu soo galo Device Menu Boot marka nidaamka bilaabmin. Dooranaysaa USB ee CD-ROM Drive oo ka dhacay on gala, iyo inaad helayso shaashadda soo socda. Dooro in "Boot ka LiveBoot", oo aad qaadan doonta dhawr daqiiqo in ku shuban faylasha Windows ka hor inta aanad gelin nidaamka.
4. Ka dib galaan kombuyuutarka, guji "Password & Key Finder" menu on LiveBoot ah si aad u hesho "Password Admin Resetter", kaas oo awood kuu inay dib sirta aad ilowdo sida maran. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in ay sameeyaan mid ka mid click on badhanka cagaarka ah ee "Admin Password Resetter". Markaasay aad barkinta karaa disk iyo guuleysatey kombiyuutarka. Waxaad ka heli doontaa oo aad ka heli karaa kombiyuutarka si toos ah oo aan la weydiiyay password.
Habka 2: XP Qarsoon Maamulaha Account
1. Windows XP yimaado la Maamulaha xisaab qarsoon oo laga heli karaa adigoo raacaya habab si password lunsan oo xisaab kale admin la bedeli karaa tan Maamulaha default Account. On Windows XP guddi login Screen, ku dhacay Ctrl + Alt + Del laba jeer ka dib in guddi login ah arbushin ilaa doona. Magaca adeegsadaha Just galaan sidii Maamulaha oo ka dhacay galaan.
2. Inta aad qortey sida admin oo aad u baahan tahay in la beddelo wax sirta account user kaliya tagaan si ay u ordaan oo nooca Lauch hadda galaan user shabaqa ka dibna ku dhuftay galaan. Waxay ku tusi doono oo dhan users on mishiinka.
3. Hadda galaan user shabaqa [account_name] *
Tusaale: user shabaqa hi *
Waxay ku weydiin doonaan password cusub, ka dibna waxaad geli kartaa mid cusub sida aad u doonayo. Laga soo bilaabo login soo socda waxaad yeelan doontaa in ay galaan password this xisaab kala.
Habka 3: Iyadoo Safe Mode
Guuleysatey jaraa'id oo muhiim ah nidaamka F8 in ay kabaha in hab nabad ah halkaas ka soo gasho Maamulaha Account aan password. Tani waa hab sahlan oo inta badan ka shaqeeya haddii default maamulka qarsoon ma beddelmin.
Habka 4: Isticmaalka daaqadaha cajalid XP-khaanada Downlaods
1. Dooro Boot ka CD doorasho ka BIOS menu iyo geliso disc khaanada Downlaods, kaliya riix furaha kasta marka ay keentay in sida "riix furaha kasta si kabaha ka CD" .Raac nidaamka Setup iyo aqbalo heshiis liisanka by F8 garaacid.
2. Isticmaal arrow furayaasha in ay doortaan XP rakibo (haddii aad leedahay mid ka mid ah oo keliya, waa in mar hore la soo xulay) iyo saxaafadda R laga bilaabi karo habka dayactirka. Ka dib markii ay si dhamaystiran ugu guulaysto dayactir daaqadaha la bilaabi doono oo mar kale soo bandhigi doonaa "riix furaha kasta si kabaha ka CD".
3. Kaliya aadan wax ku samayn, oo hadda kabaha si toos ah marka aad aragto xiridda Device Bar hoose ee koonaha bidix ee hoose. Shift Press + F10 hadda furi doonaa Console.
Amarka 4.Write nusrmgr.cpl . Si aad xaalkaa sirta ah ama ka kaxeeyo, sidoo kale Nooca aad kara beddel userpasswords2 in Console ku darto user cusub password kasta. Hadda login la aqoonsiga cusub ka dib markii habka dayactirka si guul ah u dhameystiray.
Habka 5: Isticmaalka regedit
1. Marka aad hesho regedit nooca Console ah.
2. Tani furi doonaa menu diiwaanka hadda maraan si SOFTWARE \_ HKEY_LOCAL_MACHINE \_ Microsoft \_ Windows NT \_ CurrentVersion \_ Winlogon \_ SpecialAccounts \_ UserList in Editor Diiwaanka.
3.Now double doorasho Maamulaha click in guddi saxda ah. Laakiin haddii aanay waxaa markaas xaq click in guddiga dhinaca midig oo dooro cusub Dword iyo magaca sida Maamulaha oo ka dhacay galaan. Ma click laba doorasho cusub abuuray iyo geli qiimaha 1 iyo saxaafadda Waayahay.
4. Hadda dib uga bilowdo uu furmo suuqa waxaad arki doontaa login ah Maamulaha user cusub oo aan password u samaysaa in la beddelo password of account lumay.
Habka 6: Isticmaalka mar regedit
1. Marka aad heli nooca Console "regedit" (amar furitaanka Registry) oo saxaafadda u gala. Hadda waxa laga bilaabo waxaan u leeyihiin in ay si taxaddar dheeri ah mid ka mid qalad xaqiro laga yaabaa in nidaamka qalliinka aannu oo aad u isticmaali karin. In dhinaca bidix ee Editor Diiwaanka guji "HKEY_LOCAL_MACHINE" ka dibna ku File menu guji "Load rugta".
2. Hadda Browse waddo socda:
Windows Os la wado [c]: daaqadaha \_ \_ system32 \_ config \_ SAM
Fiiro Gaar ah : Tani file SAM u taagan yahay tababare Security Accounts, taas oo mas'uul ka ah maaraynta dhan aqoonsiga xisaab nidaamka si ay u asal ahaan ka kooban yahay macluumaad ku saabsan magacyada lo xisaabta iyo sirta ah.
3. Ka dib markii loading rugta ka, waxay ku weydiin doonaan magaca, nooca wax kasta oo aad xasuusan karo. In kiiskeyga waxaan siin doonaa magaca "pass". Haddaba sidaas daraaddeed file SAM la raran galay diiwaanka loogu tafatirka.
4.Now inay soo socda buugga "HKEY_LOCAL_MACHINE imtixaanka \_ \_ SAM \_ Domains \_ Account \_ Users" tagaan. Guji "000001F4" oo ka soo guddiga dhinaca midig double-riix "F" galo.
5. A new window furi doonaa oo waxaad wax ka bedel kartaa "F" galo. Line ah in uu bilaabo la "0038" waa waxa aad rabto in aad wax ka bedel. Qiimaha soo socota si ay "0038" waa "11", waxay ku bedelaan "10". Ka digtoonaaw in aad beddesho wax kale. Just double riix "11" oo ku qor "10" ka dibna ku dhuftay badhanka OK. "11" waxaa loogu talagalay dadka naafada ah iyo "10" ee karti.
6. Back in Editor Diiwaanka, dhinaca click bidix magaca aad i siisay inay rugta aad hore ku raran yihiin oo guji "dajinaya rugta" ka menu faylka, guuleysatey computer ka iyo waxa aad samaysay. Account Maamulaha ayaa hadda karti.
> Resource > Windows > 6 Siyaabaha crack Windows XP Maamulaha Password